सृष्टिक्रम तथा ब्रह्माण्ड वर्णन, कसरी भयो महादेव र सतीदेवीको विवाह?
खण्ड–१ : सृष्टिक्रम तथा ब्रह्माण्ड वर्णन
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ –हे! अगस्त्य मुनि, सृष्टिका क्रम र ब्रह्माण्डको वर्णन जसरीन गरिएको छ, उक्त पवित्र कथालाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महात्म्यका आधारमा म तिमीलाई सुनाउँछु, एकाग्र भइ सुन। यो अनन्तकोटी ब्रह्माण्डका नायक सृष्टिकर्ता परमात्माले आफूलाई ३ देवताका रुपमा प्रकट गर्नुभयो। पहिले ब्रह्मा सृष्टि गर्न, विष्णुपालन गर्न र महेश्वरलाई संहार गर्न बन्नुभयो। त्यसकारण परमब्रह्माका इच्छाबिना सृष्टि, स्थिति तथा संहार केही केही हुनसक्दैन। र, उहाँकै इच्छाअनुसार यो संसारको सृष्टि, स्थिति तथा संहारका अनन्तचक्र चलिरहन्छ। ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरमध्ये विष्णु र महेश्वरको आयुको कुनै प्रमाण छैन। ब्रह्माको सय वर्षको आयु हुन्छ। उक्त सय वर्षको आयुमध्ये एकदिनमा बिहान सृष्टि हुन्छ, दिउँसोदेखि रात नपरेसम्म स्थिति हुन्छ भने रात परेर निदाएको समय संहारको समय हो। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलिकाल बिहान, दिउँसो , साँझ र रात जस्तै हुन्। अनि ब्रह्माको सय वर्षमा महाप्रलय हुन्छ। फेरि परमात्माले अर्को ब्रह्मा सृष्टि गर्नुहुन्छ र यसैक्रमले अनन्तकालसम्म सृष्टिकार्य चलिरहन्छ। ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरमा विष्णु सत्व, ब्रह्मा रजो तथा महेश्वर तमो गुणका प्रतिनिधि हुन्। सृष्टिका लागि सबैभन्दा पहिले पञ्चमहाभूत तत्त्वहरु मन, बुद्धि , शब्द, रुप , रस, गन्ध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि सृष्टि गरिसकेपछि मात्रै प्राणीको सृष्टि हुन्छ। त्यसैले यी कुराहरु सम्पूर्ण प्राणिमा व्याप्त हुन्छन्। सृष्टिका तत्त्वहरु कुनै पनि सजीव र निर्जीव हुँदैनन्। सबै सजीव नै हुन्छन्। विज्ञानले निर्जीव भनेका कुराहरू लगायत सबै कुराहरुमा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरहरु घुमिरहेका हुन्छन्। अनि यसरी घुम्ने क्रम सकिँदामात्र उक्त प्राणीको अन्त्य हुन्छ, र सृष्टिका चक्रहरू पारगरिसकेपछि प्रलयको समयमा अन्त्य हुन्छ। एउटा अण्डामा भित्री, बाहिरी आवरणहरु भएजस्तै पृथ्वीलगायत ब्रह्माण्डमा पनि यस्तै आवरणका चक्रहरु हुन्छन्। त्यस्तै नवजातवालक मानवको शरीरमा पैदा हुँदा सम्पूर्ण चक्र पार गरिसकेपछि मानव बालक बनेजसरी पृथ्वीमा सृष्टि हुँदा सरिश्रृप, उभयचर हुँदै मानवसम्म भएर कालान्तरपछि सृष्टिको विकास भएको हुन्छ। यो क्रम प्रत्येक मानवको गर्भ प्रक्रियामा अहिलेसम्म पनि उदाहरणका रुपमा चलिरहेको हुन्छ, र यो सृष्टिको प्रमाण हो। त्यस्तै अण्डदेखि ब्रह्माण्ड यी दुई सङ्ख्याहरू मात्रै हुन्, यस्ता उदाहरणका सङ्ख्याहरू अनन्त हुन्छन्। त्यस्तै प्रकृति र पुरुष भएर सृष्टिको बृहत्तर सङ्ख्या बृद्धि भएको हुन्छ। चाहे स्त्री पुरुष, चाहे बीज माटो, चाहे आकर्षण विकर्षण, चाहे क्रिया–प्रतिक्रिया यीसबै सृष्टिकै मूलभूत प्रक्रिया हुन् र परमात्मामा अनन्त पनि अटाउँछन्। परमात्मा एक प्रकारले सबैभन्दा सूक्ष्म पनि हुन् तथा सबैभन्दा विशाल पनि हुन्। यसका लागि परमात्माले अनन्त आकाश उदाहरण दिएका छन्। त्यसैले यो परमात्माको परिभाषाको वर्णन गर्न कोटीकोटी ब्रह्मा, विष्णु महेश्वरले पनि सक्दैनन्। त्यसैले जतिजति ब्रह्माण्ड छन्, त्यतित्यति ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर हुन्छन्, त्यसैले परमात्मालाई कसैले आँक्न सक्दैनन्। यो सृष्टिक्रम भनेको निदाउँदा जतिपनि हामी देख्छौं, पछि ब्यूझिँदा विलय भए जसरी मृत्युपछिको जीवनमा ब्यूझिँदै–ब्यूझिँदै जान्छौं। निदाएको अवस्थामा सुख, दुःख, हर्ष ,विस्मात यी यावत् जति प्राप्ति हुन्छन्, त्यसलाई ब्यूँझिदा प्राप्त गर्न नसकेजस्तै मृत्युपछि पनि अर्को जन्ममा त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले यो संसार सुखदुःखादि सपनाझैं अनित्य छ। त्यसैले यी सांसारिक कुराहरू सब मनका झमेला मात्रै हुन्। मूल कुरो परमात्मा जान्नु हो। त्यसैले विवेकी प्राणीको एकमात्र लक्ष्य मन, वचन र कर्मले ज्ञानद्वारा परमात्माको कार्यमा सघाउनु हो।
खण्ड–२ : सृष्टिक्रम तथा ब्रह्माण्ड वर्णन
पहिले यो संसारमा प्रलय भएर शून्यबाहेक केही नभएको अवस्थामा महामायाका प्रभावले सबै ठाउँमा जलैजल थियो। फेरि महामायाका प्रभावले उक्त जल अनन्त क्षीर सागर भयो। त्यसैबेला महामायाका प्रभावले परब्रह्म परमेश्वर क्षीर सागरमाथि शेषनागमाथि शयन गर्नुभएको थियो। उक्त परब्रह्म स्वरुप विष्णु भगवानको नाभीमा कमलको उत्पत्ति भयो। र, धेरै माथिसम्म डाँठ फुलेर हजारौं। पातहरू फक्रिएर फुल्दा त्यस पद्मकल्प कमलमाथि ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो। अनि ब्रह्मालाई सृष्टि गरौं भन्ने प्रेरणा प्राप्त भयो। त्यसैबखत विष्णुको कानबाट कानेगुजी निस्कियो र त्यस कानेगुजीबाट मधु र कैटभ नामका दैत्यहरू बने। ती दैत्यहरू यताउती हिँडडुल गर्दा जताततै पानी नै पानी देखे। अनि सोही कमलको डाँठबाट माथि उक्ले। कमलका पत्रहरु झार्दै ब्रह्माजीलाई खसाउने प्रयत्न गरिरहे। त्योदेखेर डराएर ब्रह्माजीले महामायाको स्तुति गर्नुभयो। महामायाले विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिनुभयो। विष्णु भगवान जागा भइसकेपछि दैत्यहरुले ब्रह्मालाई सताइरहेको देखेर त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। तर, दैत्यहरू विष्णु भगवानमाथि जाइलागे। त्यसपछि विष्णु भगवान र दैत्यहरुका बीचमा पाँच हजार वर्षसम्म घोर घमासान युद्ध भयो, तर कसैको पनि हारजीत भएन। अनि विष्णु भगवानले हार मानी ‘हामी यसरी कत्ति लड्ने, बरु तिम्रो इच्छा के छ? वरदान माग’ भन्नुभयो। तर, मधु र कैटभ दैत्यहरूले अहंकारले ‘तिमीले हामीसँग पो वरदान माग्नुपर्छ, के वरदान चाहियो?’ भने। विष्णु भगवानले पनि ‘मागेको वर दिनुपर्छ’ भन्ने वाचा गराए, अनि ‘हे दैत्य हो! मेरो हातबाट तिमीलाई मार्न पाऊँ’ भने। अनि दैत्यहरूले भने ‘हे छलकपटी विष्णु! तैंले छल गरी वरदान मागिस्, तर हामी वचनमा हार्दैनौं, तिम्रो इच्छा पूर्ण होस् तर हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार।’ भने। सम्पूर्ण ठाउँ जलामय मात्र भएकाले विष्णुले आफ्नै काखमा राखी मधु र कैटभलाई मारे। अनि ब्रह्माजीलार्इ पनि मधु र कैटभका शरीरका अङ्गहरूबाट स्थलहरू बनाउने उपाय प्राप्त भयो। पृथ्वीजस्ता आकारका लोकहरू बनाएर पर्वत, ढुङ्गा तथा अनेकौं वस्तुहरू बनाउनु भयो। एकमाथि अर्को लोकहरू गर्दै भूर्लोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक , महलोक, जनलोक, तपोलोक र सत्यलोक गरी माथिका लोकमुन्तिर अर्को, अर्कोको मुनि अर्को गर्दै अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल गरी सातलोक गरी चौध भूवनको सृष्टि गर्नुभयो। अनि भूलोकका वरिपरि ज्योतिर्मय रथमा चढेका स्वायम्भूव मनु उत्पत्ति भए र सोही रथको पाङ्ग्रा गुड्दै जाँदा पृथ्वीमा सात समुद्र र सात द्वीप जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप र पुष्करद्वीप, त्यस्तै समुद्रहरू क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमण्डोद र शुद्धोद बने। त्यसपछि प्रियव्रत नामका मनुको उत्पत्ति भयो। उनकी पत्नीको नाम वर्हिष्मती थियो। उनीहरूबाट सातभाइ छोराहरू उत्पत्ति भए। उनीहरूका छोराहरू क्रमशः आग्नीध्रले जम्बूद्वीपको राज्य चलाए। यो द्वीप क्षारोद समुद्रले घेरिएको छ। इध्मजिह्वले प्लक्षद्वीपको राज्य चलाए। यो द्वीप इक्षुरसोद समुद्र अर्थात् उखुको रसको समुद्रले घेरिएको छ। यज्ञबाहुले शाल्मलीद्वीपको राज्य चलाए। यो द्वीप मदिराको समुद्रले घेरिएको छ। हिरण्यरेताले कुशद्वीपको राज्य चलाए। यो द्वीप घिउको समुद्रले घेरिएको छ। घृतपृष्ठले क्रौञ्चद्वीपको राज्य चलाए। यो द्वीप दूधको समुद्रले घेरिएको छ। मेधातिथिले शाकद्वीपको राज्य चलाए। यो द्वीप दधिमण्डोद अर्थात् मोहीको समुद्रले घेरिएको छ। वीतीहोत्रले पुष्करद्वीपको राज्य चलाए। यो द्वीप शुद्धोद अर्थात् पवित्र जलले घेरिएको छ। जम्बूद्वीपको क्षेत्रफल एकलाख योजनको छ। यसमा नौ खण्डहरू भद्र, अश्व, हरि, केतुमाल, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, किम्पुरुष र भारत छन्। भारतखण्डमा गङ्गा, काशी, वागमती, नारायणी आदि गरेका पवित्र नदी र तीर्थहरू छन्। यसरी सबै द्वीपहरूमा खण्डहरुको विभाजन गरिएको छ। अष्ट पर्वतहरू सुमेरु, गन्धमादन, कैलाश, हिमालय, त्रिकूट, चित्रकूट, चन्द्रकुट र चन्द्रान्तक सृष्टि भए। अनि ब्रह्माजीले प्राणिको सृष्टि गर्न महादेवको तपस्या गरे। महादेवले पनि तथास्तु भनी वरदान दिए। तहाँउप्रान्त ब्रह्माजी सुमेरु पर्वतमा गए। त्यहाँ पुगी शिवलोक, विष्णुलोक, उमालोक, स्कन्दलोक आदिलोकहरू सृष्टि गरे। सुमेरु पर्वतको पूर्वमा –ऐरावती, पश्चिममा –श्रद्धावती, उत्तरमा –अलकापुरी, दक्षिणमा –यमपुरी, त्यस्तै इशानमा –यशोमती, नैऋत्यमा –कृष्णावती, वायव्यमा –गन्धावती र आग्नेय दिशामा शुद्धावतीको सृष्टि गरे। त्यसपछि स्थावर जङ्गमको सृष्टि गरी प्राणीहरूको सृष्टि गर्न थाले। कुमारको मुखारविन्दबाट यी दिव्य कथाहरू सुनेर अगस्त्य मुनिले देवता, दैत्य तथा मनुष्यको कसरी सृष्टि भयो भनी मनसुवा गरी सुध्याए। अनि पार्वतीनन्दन कुमारजीले भने ‘माथि कहिएका सय ऋषिहरुमध्ये ज्येष्ठ कश्यपका तेह्रवटी स्त्री थिए। तिनीहरू दिति, अदिति, दनु, राका, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, वलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु र मनु नाउँका थिए। दितिका गर्भबाट हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जस्ता राक्षसहरू जन्मिए। अदितिबाट इन्द्र, चन्द्र, सूर्य आदि तेत्तीसकोटि देवता। दनुका गर्भबाट वृषपर्वा आदि दानवहरु। राका र घोराबाट गन्धर्वहरु। सिंहिकाबाट राहु, क्रोधाबाट क्रोध र प्राधाबाट रम्भा आदि अप्सराहरूको जन्म भयो। चराचुरुङ्गीहरू बलिष्ठाका गर्भबाट तथा विनताका गर्भबाट अरुण, गरुड आदि जन्मिए। कपिलाका गर्भबाट गाइ, सिंह, हात्ती, मृग आदि भए। यस्ता प्रकारले देवता, दानव, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशुपंक्षी, कीटपतङ्ग, आकाशमा उड्ने, भुइँमा घस्रिने, पानीमा पौडने गरी जलचर, स्थलचर, नभचर प्राणीको सृष्टि विकासक्रमसँगै विकास हुँदै उत्पत्ति हुँदै गए। अनि ब्रह्माजीले यिनीहरुलाई आहाराका लागि सप्त धान्यादि अनेकौं प्रकारका आहाराहरु विकासक्रम सँगै उत्पत्ति गर्दै रहे। हे अगस्त्य मुनि! प्रजापति जम्मा आठ थिए। तिनैलाई अष्ट प्रजापति भनिन्छ। तीमध्ये जेठा प्रजापतिको नाउँ दक्ष थियो, उनलाई दक्षप्रजापति भनियो। तिनकी पत्नीको नाउँ विरणी थियो। तिनी गर्भवती भइन्। अनि बत्तीस लक्षणले युक्त भएकी कन्या जन्माइन्। उनै सतीदेवी भइन्।
खण्ड–३ : सतीदेवीको कन्यार्थमा भगवान विष्णुको प्रसंग
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे! अगस्त्यमुनि, दक्ष प्रजापतिकी स्त्री विरणीले सतीदेवीको जन्मपछि अरु पनि धेरै कन्याहरु जन्माइन्। यसक्रममा उनीबाट तेत्तीस कोटी कन्याहरु भए। ती कन्याहरुलाई दक्ष र विरणीले समान माया र ममताका साथ लालनपालन गर्दै रहे। ती कन्याहरु पनि ज्वाज्वल्यमान रुप र लावण्यका भए। स्वर्गका सम्पूर्ण देवताहरू ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दिक्पाल, नाग, प्रभृत्ति सबै एकै ठाउँमा भेला भएर ‘हामी सबै तेत्तीस कोटी देवताहरुले दक्षका तेत्तीस कोटी कन्या मागेर घरजम गर्नुपर्छ’ भनेर निधो गरे। अनि नारदलाई यो विवाहको कुरा चलाउन पठाए। दक्ष प्रजापतिले आफ्नी सबैभन्दा राम्री जेठी छोरी सतीबाहेक सबैलाई बिहे गरिदिने वचन दिए र भने ‘मेरो पनि छोरा छैन यसलाई छोरा बनाएरराख्न नदिएको हुँ’ भनेर भने। दक्ष प्रजापति पनि हर्षित भएर ‘हजूरले भन्नुभएको जुनसुकै समयमा पनि दिन तयार छु’ भने। ‘हाम्री छोरीहरुको पनि घरजम हुने भयो धन्य नारदमुनि’ भनी दक्ष र विरणी हर्षित भए। देवताहरु सबै बाजागाजाका साथ दक्षकहाँ जन्ती आए र वैदिक विधिपूर्वक कन्यादान लिए। अनि सबै देवताहरु आ–आफ्ना स्थानमा गए। श्री महादेवजीले कैलाशमा ध्यान गरिरहनुभएको बेला ध्यानदृष्टिले हेर्दा सबै देवताहरुको विवाह भइसकेको थाहा पाए अनि साह्रै चित्त आकूल गरे। फेरि दक्षको घरमा एउटी कन्या बाँकी भएको ध्यानदृष्टिले पत्ता लगाए। अनि मलाई सम्झेरै राखेका रहेछन् भनेर हर्षित भई दक्षकहाँ कन्या माग्न गए। दक्ष प्रजापति –आज तँ मेरामा कति कामले आइस्, हे दिगम्बर। महादेव –मैले यहाँ आउनुको कारण के हो भने तेत्तीस कोटी देवताहरुले कन्या पाए। उनीहरुले घर बसाए। सबैको उद्दार भयो। मेरै लागि जेठी छोरी बाँकी राखेका रहेछौं। अब मेरो पनि उद्दार गर। दक्ष प्रजापति – हे शरम पचेको दुष्ट महादेव। बत्तीस लक्षणले सुन्दरी मेरी सबैभन्दा राम्री छोरीको तँ जोडी हुन सक्दैनस्। तँ स्मशानबासी, खरानी घस्ने, भूतप्रेतसँग डुल्ने, नागको माला लाउने, बिख, भाङ्ग, धतुरो खाने। मेरो घरमा एकछिन पनि नबस्, तँ गइहाल्। (यसरी अरुपनि धेरै–धेरै अपमान गरेर भनिसकेपछि महादेवको पाखुरा समातेर दक्षले श्री भोलेनाथ महादेवजीलाई घरबाहिर निकाल्यो।) महादेव –इच्छा छैन भने, नदिने भए दिन्न भने भइहाल्थ्यो। यस्तरी निन्दा गरेर अपमान नगरेको भए हुन्थ्यो। त्यसपछि अति मन दुखाई भगवान् महादेवजी विष्णुलोकमा भगवान विष्णु कहाँ गए र ‘मलाई दक्ष प्रजापतिले यसरी यसरी अपमान गर्यो’ भन्दै ‘खासमा म यसो भनेर त्यहाँ कन्या माग्न गएको थिएँ’ भने। अनि विष्णुले महादेवलाई ‘हजुर यहाँ विष्णुलोकमा एकछिन बस्नुस् है, म चाँजोपाँजो मिलाएर आउँछु।’ भनेर वहाँ दक्ष प्रजापति कहाँ जानुभयो। भगवान विष्णु आगमन भएकोदेखी दक्ष प्रजापतिले कमण्डलुले गोडा धोइ ठूलो आसनमा बसाले र ‘हजूरलाई के सेवा गरुँ’ भनी सुध्याए। विष्णु –हे दक्षप्रजापति, म केही माग्न आएको छु। दिन्छौं भने मात्र माग्छु? दक्ष प्रजापति –लौ प्रभु यी मेरा सर्वश्व सबै हजुरकै त हो नि। हजुरले जे भन्नुभो त्यही दिन्छु। म वाचा गर्छु प्रभु। विष्णु –म बैकुण्ठलोकको अधिपति भएर पनि मेरा पत्नी छैनन्। कन्या दिइ मलाई उद्दार गर। किनभने तिम्री एउटी कन्या सतीदेवी अविवाहित नै छिन्। यसैबाट मेरो घर बसाऊ र मेरो उद्दार गर। दक्ष प्रजापति –हे भगवान! मेरा छोरा छैनन्, सतीदेवी मेरी छोरी नै भएपनि मेरो यो अति प्यारो छोरो होभन्दा हुन्छ। यसलाई दिने ता मन थिएन, तर हजूरसँग बाचा गरिसकेँ। म वचनलाई मिथ्या जान दिनेछैन। समय मिलार्इ साइत हेरेर शुभ समयमा हजुरलाई कन्यादान टक्य्राउँला। फेरि भगवान विष्णु विष्णुलोक आउनुभयो र महादेवलाई यसोयसो गरेँ भनेर ‘हजुरलाई भनी मागेँ भने दिन्न भन्लान् भनेर आफैँलार्इ सतीदेवी मागेर आएँ’ भनी बताउनु भयो। विष्णु भगवानले महादेवलाई फेरि भन्नुभयो –म गएको काम होला नै जस्तो छ। विवाहको दिन हजुर बृद्ध सन्यासीको रुप लिएर आउनुस् र भिक्षा नलिई जान्न भन्नुस्। त्यतिखेर म ‘म कन्यादानको साइत सक्ने बितिक्कै भिक्षा दिन्छु, मसँगै आएर एकछिन पर्खनुहोस्’ भनेर भन्छु। अनि म ‘विवाहमण्डपमा मसँगै आएर बस्नुस्’ भन्नेन्छु। हजुरले पनि त्यसै गर्नुस्। कन्यादान दिनेबेलामा मेरो हात राख्ने ठाउँमा हजुरको हात राखिदिउँला। उनीहरुले कन्यादानको धमाधममा यस कुराको हेक्का राख्दैनन्, र मन्त्र पढिसकेपछि ‘सती हजुरकी भइन्’ भनेर म दक्षलाई सम्झाइबुझाइ गरिदिउँला। यो बार, यो तिथि, यो लग्न, यो नक्षत्र, यो बेलामा साइतको समयभन्दा एकछिन अगाडि हजुर सन्यासी भएर टुप्लुक्क आइपुग्नुहोस् भनी महादेवलाई विष्णु भगवानले सम्झाउनुभयो। अनि भगवान् महादेव पनि अति प्रसन्न हुँदै कैलाश पर्वतमा प्रस्थान गर्नुभयो।
खण्ड–४ : महादेव र सतीदेवीको विवाह
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, केही दिनपछि लगन ठहर्याइएको दिनमा श्री विष्णु दक्ष प्रजापतिका घरमा पुगी महादेवको बाटो हेर्न थाल्नुभयो। दक्ष प्रजापतिले पनि विवाहको सामग्री तयार गराई यज्ञको विधिपश्चात् कन्यादान दिन तयार भए। कैलाशमा महादेव वीष, भाङ, धतुरो खाइ मस्त भई विवाहमा जान भुल्नुभयो। ‘महादेव अझै आइपुग्नु भएन, कन्यादानको समय हुन आँट्यो, मैले यो दान थापेँ भने श्री भोलेनाथमाथि अन्याय हुन्छ अब कसो गरुँ? के गरुँ?’ भनी मनमा खुलदुली र आकुलब्याकुल भइ विष्णु भगवान् छटपटाउन थाल्नुभयो। उता महादेवको पनि त्यसै बेला चेत खुल्यो अनि कन्यादानको बेला हुन लागेको झट्ट सम्झनुभयो। र जागा हुनुभयो अनि विष्णुले अह्राउनु भएअनुसार विवाह मण्डपमा पुग्नुभयो र भन्नुभयो –‘हे दक्ष, प्रजापति म अति टाढाबाट आएको छु। मलाई धेरै भोक लागेको छ। मलाई भीक्षादान नगरी कन्यादान लिएमा वा दिएमा दुवै पक्षलाई श्राप दिन्छु।’ विष्णु –हे बृद्ध भिक्षुक! कन्यादानको ठिक्क समय हुन आँट्यो, यो लग्न टार्नु हुँदैन। कन्यादान सक्ने बितिक्कै तिमीले भिक्षा लेऊ। अहिले मसँगै छेउमा आई बस। त्यसपछि श्री महादेवजी विष्णुको छेउमा आएर बस्नुभयो। त्यसैबखत भगवान विष्णुले आफ्नो मायाले दक्ष प्रजापतिले मन्त्र पढेर हात सुम्पन लागेको बेला उनको आँखा छली सतीदेवीको हात बृद्ध सन्यासीको रुप लिएका महादेवको हातमा पारिदिनुभयो। माया हटिसकेपछि दक्षप्रजापतिलाई चेत आयो र मनमा बडो खेद मानीकन भने –‘हे विष्णु! तिमी कपटी रहेछौं, तिम्रो छलले गर्दा मेरी पुत्री यस अवस्थामा पुगी। तिम्रो विश्वासमा परी म ठगिएँ।’ दक्षप्रजापतिले यसो भनेको सुनी तत्कालै भगवान विष्णु सन्यासीरुप महादेवसित बिदा भइ अन्तर्ध्यान भइ विष्णुलोक बैकुण्ठमा जानुभयो। विष्णु भगवान जानु भइसकेपछि दक्ष प्रजापतिले छोरीतिर हेरे र भने –‘हे पुत्री सतीदेवी! पापिष्ठ विष्णुका छलले गर्दा आज तिमीले यस्ता बृद्ध सन्यासी स्वामी पायौं। दुःख कत्ति पनि नमान। हामी नै तिमीलाई पालौंला। अहिलेलाई मनमा धैर्य राखी यिनै सन्यासीसित जाऊ।’ आफ्ना पिताले भनेका यी कुरा सुनी उनले भनिन् – ‘आफ्नी सबै बहिनीहरुले देवता स्वामी पाए, तर मैले बृद्ध सन्यासीका हातमा परेँ।’ यस्तो सम्झी बडो विषाद गरी उनी आफूलाई धिक्कारी भक्ककानिएर रुन थालिन्। केहीबेरपछि आफूले आफैलाई सम्झाउँदै बरबराउन लागिन् – ‘मेरो कर्ममा जे लेखिएको थियो त्यही भयो। अब रोएर मात्र के हुन्छ र! जसै गरेपनि मेरो पाणीग्रहण गर्ने पुरुष भनेका यिनै बृद्ध सन्यासी हुन्।’ यसरी आफैले आफैलाई बुझाएर धैर्य गरिन्। अनि सन्यासी रुपमा महादेवले पनि सतीदेवीलाई आज्ञा गर्नुभयो, ‘हे स्त्री, अब हामीले यहाँ बसेर हुन्न। हाम्रो घर जानुपर्छ। तिमीले अब आफ्ना बाबामहतारीसँग बिदा माग।’ स्वामीको यस्तो आज्ञा सुनी सतीदेवीले आफ्ना मातापिता दक्षप्रजापति र विरणी भएका ठाउँमा गएर ‘हे पिता १ हे माता १ म अब पतिका साथ जान्छु । मलाई बिदा दिनुहोस्।’ भन्दै बिदा मागिन्। छोरीको कुरा सुनी विरहव्यथाले मुटु गाँठो पारी आँखाभरि आँशु लिएर ‘जाऊ, पुत्री’ भनी बाबा महतारीले रुँदै बिदा दिएपछि उनीहरूलाई प्रणाम गरी सतीदेवी पनि आफ्ना बृद्ध सन्यासी पतिका साथ लागिन्। जाँदाजाँदा बाटामा सन्यासीरुप महादेवबाट आज्ञा भयो – ‘हे सुन्दरी, तिमी सुकुमारी, कोमलाङ्गी, बाबाका घरमा सुखले पालिएकी, यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्न कत्ति कष्ट भयो होला! तिम्रो पाउ दुख्ला, जिउ गल्ला, सुस्त सुस्त हिँड।’ पतिले आफूलाई गरेको मिठो वचन सुनी सतीदेवीले भनिन् – ‘हे स्वामी, म भर्खरकी छु, हिँड्न सक्छु। उमेरको दृष्टिले हजूर बृद्ध भएकाले हिँड्न गाह्रो पर्छ। मलाइ त के हुन्छ र? बरु हजुर सुस्त–सुस्त हिँड्नु बेस होला’ भन्दै अरु पनि धैर्यका थुप्रै कुराहरू गरेर आफ्ना स्वामीलाई सन्तोष दिलाइन्। आफूलाई भर्खरकी युवती र पतिलाई बृद्ध देखेर ‘मेरा पतिलाई कसैले हप्काए वा केही गरी मलाई खोसी लगे भने के होला?’ भनी मनमा अनेकौं तर्कना र चिन्तना गरी सतीदेवीले पतिलाई एकैछिन पनि नछोडी सँगसँगै हिँड्न थालिन्। जाँदाजाँदा कैलाशको नजिकमा पुगेपछि सतीदेवीको चरित्र जाँच गर्नुपर्यो भनी महादेवले कैलाशका शिखरमा एउटा खरले छाएको झुप्रो निर्माण गर्नुभयो। अनि भन्नुभयो – ‘हे स्त्री, हाम्रो घर अब आइपुग्नै आँट्यो। ऊ त्यो माथि देखिएको छाप्रो हाम्रो घर हो। त्यहाँ पुगेर विश्राम गरौं।’ भनी झुप्रोमा पुर्याउनु भयो। त्यहाँपुगेपछि फेरि भन्नुभयो – ‘हे प्रिये, भित्र गएर केही खाऊ र थकाइ मार। म पनि धेरै थाकेँ। एकछिन बाहिरै सुत्छु।’ यति भनी विष, भाङ, धतुरो खाइ छाप्रोको दैलोबाहिर भुइँमा पल्टिनुभयो। सतीदेवीलाई सानो खरले छाएको झुप्रो घर देख्दा आफ्ना बाबाको घरको याद आयो र मन खिन्न बनाइन् – ‘त्यस्ता महलमा बसेकी मलाई आज यस्ता घरमा आइ बस्नुपर्यो’ भनी दुवै आँखाबाट बलिन्द्रधारा आँसु बगाइरहिन्। फेरि चेष्टा भयो र ‘दैवले आफ्ना निधारमा जे लेख्या हो सो भएरै टर्छ। अब सुर्ताएर केही हुँदैन।’ भनेर आफ्नो मन आफै बुझाइ आँसु पुछिन्। केहीबेरपछि घरभित्र पसी हेर्दा कुनाकाप्चा, भित्तो र छानोतिर माकुरोको जालै–जाल मात्रै देखेर कुचोले माकुरोको जालो बढारिन्। ‘पतिदेव ब्यूझिबक्सिएपछि के खानुहोला’ भनी सबैतिर खानेकुराहरु खोज्न थालिन्। केही खानेकुरा देखिनन्। र, महादेवको चरणको मुख्याञ्जी हँसिलो अनुहार गरी बसिरहिन्। घरमा आइपुगेको चारदिनपछि मात्र महादेवको निद्रा टुट्यो। आफ्ना गोडामुनि हँसिली बनी बसिरहेकी सतीदेवीलाई देखी महादेवलार्इ असाध्यै माया लाग्यो। यद्यपि हर्षाश्रु दबाएर बाहिरबाट रिसाएजस्तो गरेर ‘हे पापिनी, मलाई एक्लै बाहिर सुताएर आफूचाहिँ भित्र सुतिस्? सो हुँदा पनि तँलाई केही खानु पर्दैन नि? केही खाइस् कि खाइनस्?’ भन्नु्भयो। यसरी आफ्ना स्वामी रिसाउन लागेको देखी नारीमा हुनुपर्ने नम्रता र पतिभक्ति आदि गुणले युक्त भएकी सतीदेवीले जुनझैँ उज्यालो र हँसिलो मुख लगाई सन्यासीरुपी महादेवको मुहार हेरिरहहिन्। अनि भनिन् – ‘हे स्वामी, थकाइले गर्दा हजुर साह्रै निदाइबक्सेको देखी ब्युँझाउन सकिन। म सुतेकी छैन। हजूरकै छेवैमा बसिरहेकी छु। अब हजूर के खाइबक्सन्छ। मैले त भित्र भाँडामा भएका मिठामिठा मिठाइहरु खाइसकेकी छु।’ रुपकी राम्री त्यसमाथि नाना श्रृंगारले सजिएकी रिस र अरु सबै अवगुणहरु पैतालामुनि दबाएकी पतिव्रता सतीदेवीले भनेको कुरा सुनी नारीमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुणहरु भएको बुझी ठूलो करुणा लिई श्री महादेवले भन्नुभयो – ‘प्रिये यहाँ के थियो र खायौं होला? यो त हाम्रो घर होइन । त्यो खरले बारेको भित्तो च्यातेर पल्ल्लातिर हेर त!’ पतिको यति कुरा सुनेर सतीदेवी भन्छिन् – ‘हे स्वामी, भएको घरलाई भत्काएर नभएको घर कहाँ हेर्नु? म स्त्री जाति र हजुरको बुढो उमेर! भत्केको घरलाई कसले बनाइदेला?’ सतीदेवीको कुरा सुनी सन्यासीरुपी महादेवले खरको भित्तोलाई लात्तले हानेर कैलाशपुरीको दर्शन गराउनुभयो। धेरै रत्न, धातु, मणिमाणिक्य आदिले सुशोभित, चिन्तामणि र कल्पवृक्ष आदिले वेष्टित कैलाशको रमाइलो शान्त ठाउँमा सुवर्ण नै सुवर्णले बनाएको आफ्नो घरलाई देखी अति प्रसन्न भएकी सतीदेवीले आफ्ना बाबाको भन्दा पनि अति सुन्दर र उत्तम घर देखी आश्चर्यमा पर्दी भइन् र धेरै खुशी भइ हर्षका आँशु बगाइन् र ‘धन्य मेरो पतिदेव’ भनिन्। त्यसपछि सन्यासीरुप धारण गरेका महादेवले कैलाशको चोकका माझमा गाइको गोबरले लिपेर रेखीले अखण्ड मण्डलाकार बनाउन आदेश दिनुभयो। आदेश अनुसार बनाएपछि सन्यासीरुपी महादेव त्यो मण्डलाकारभित्र विराजमान भएर ‘हे प्रिये, अब मेरो सक्कली रुपलाई हेर।’ भनी कपूर जस्तो स्फटिक वर्ण, करुणाका मूर्ति, संसारका सार र नागका माला हार लगाएको आफ्नो साकार अति नै ज्वाज्वल्यमान रुपको दर्शन गराउनुभयो। यस्तो विश्वम्भरमूर्तिको दर्शन पाएर सतीदेवीले हर्षाश्रु बगाई ‘कैलाशपति श्री महादेवलाई मैले आफ्नो स्वामी बनाउन पाएकी रहेछु। म धन्य भएँ।’ भन्दै फूलको माला हातमा लिएर कमण्डलुको जलधारा बगाई तीन पटक परिक्रमा गरेर महादेवको गलामा पहिर्याएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। त्यसपछि महादेव तथा सतीदेवी शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। अर्को प्रसङ्ग पञ्चम अध्यायमा बताउनेछु। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये श्री स्वस्थानी परमेश्वर्याः व्रतकथायां ब्रह्माण्डवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः।।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २४, २०७५ २३:३०